Nabadgelyada Wanaagsan tixraac saaxiib - Maalgalin farxadeed
Home > U dir saaxiib
Waxaan jecelnahay inaan ku faafinno ereyga ku saabsan "Energy Energy" waxaanan ku jeclaan lahayn inaad naga caawiso asxaabtaada iyo qoyskaaga. Haddii aad u mahadcelisid, haddii ay sii wadaan shaqooyinka qiimaha badan ee £ 1500, waxaanu jeclaan lahayn inaan ku siino shahaadada 50 Marks & Spencer. Waxaan sidoo kale siin doonaa saaxiibkaaga £ 50 * qiimo dhimista shaqada ay qabteen Energy Energy.
Fadlan buuxi foomka hoose si aan kuula xiriirno adiga oo kaa caawino baahidaada tamarta gurigaaga. Kaliya sheeg magaca magacaaga marka aad waceyso.
Mahadsanid. Mid ka mid ah kooxdayada ayaa la xiriiri doona maalmaha soo socda.
*Diyaarso dhammaan qalabka tamarta kululaynta iyo dib-u-cusboonaysiinta oo leh kharashka ugu yar ee £ 1500.